हेटौंडामा २५ मिटर नभत्किने, हाईवे नै चेन्ज गर्ने बालुवाटारमा सहमति !
आश्विन ११, २०७७ ०२:१२:५०
माघ ८, २०७६ बागमती खबर
पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको हेटौंडा बजारमा पर्ने सडक २५-२५ मिटर फराकिलो नहुने भएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा हेटौंडा बजार नभत्काउने सहमति भएको बिशेष स्रोतले बताएको छ।
छलफलमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री, हेटौंडाबाट निर्वाचित सांसद, मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघका प्रतिनिधिलगायत उपस्थित थिए।
हेटौंडाको राप्तिपुल देखि रातोमाटे सम्मको बजार क्षेत्रको सडकलाई १६ मिटर कायम गरी एसियन हाईवे अन्तर्गतको २५-२५ मिटर फराकिलो सडक नया स्थानबाट निकालिने मौखिक सहमति भएको छ।
अबको ४ महिना भित्र हाइवे परिवर्तन गर्नका लागि कताबाट मिल्छ र कुन स्थान उपयुक्त हुन्छ भनि आईईई रिपोर्ट तयार पार्न मन्त्रालयले प्राविधिक खटाउने कुरा भएको स्रोतले बताएको छ।
उक्त रिपोर्ट तयार भए पश्चात हेटौंडा बजारको सडक ३२ मिटर कायम गरिने बताइएको छ।
प्रकाशित मिति: बुधवार, माघ ८, २०७६, ०८:०१:००
तु–खबर डटकमका सम्पादक गिरिजा अधिकारी प्रेस काउन्सिल नेपालको युवा पत्रकारिता पुरस्कार–२०७७ बाट सम्मानित हुने भएका छन् । काउन्सिलले सोमवार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, सम्पादक अधिकारी नगद रु. १५ हजार राशीसहित सम्मानित हुने भएका हुन् । दुई दसकदेखि पत्रकारिता गर्दै आएका पत्रकार अधिकारी प्रदेश पत्रकार महासंघ बागमतीका सल्लाहकार हुन् । पुरा पढ्नुहोस्
समाचारको बिषयलाई लिएर हेटौंडाको कोरोना ल्याबमा लफडा भएको छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशकको मनलाग्दी शिर्षकमा आइतबार बागमती खबरमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । उक्त समाचारको बिषय उठाएर प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक नारायण कार्कीको श्रीमती र छोरीले हेटौंडा स्थित ल्याबमा सोमबार अन्य कर्मचारीहरुलाई दुव्र्यवहार गरेका छन् । भित्रको कुरो बाहिर मिडियामा किन दिएको ? कसले दिएको भन्दै उनीहरुले अन्य कर्मचारीलाई थर्काउदै अभद्र व्यवहार गरेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्